तस्बिर : मध्य नेपाल / इन्फोग्राफस
नेकपा नेता मुकेश चौरसिया हत्या काण्ड नयाँ मोडमा आएको छ ।
हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा अर्को समुहका महिलाले नेकपाका केन्द्रीय नेता नागेन्द्र चौधरी रामचन्द्र साह सहित १५ जना बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालयलले गुडिया देवीले दिएको किटानी जाहेरीमा नर्दैशनात्मक सिफारिश गरेपछि चौरसिया हत्याकाण्डमा अर्को नयाँ मोड आएको हो ।
नेकपा विन्दवासिनी गाउँपालिका कमिटिका सचिव मुकेश चौरसियाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा गुडिया देवीले जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालय मार्फत किटानी जाहेरी दिएकी छिन् ।
प्रहरीलाई यसअघि कार्तिक १६ गते पुर्व सभासद राजकुमार गुप्ता सहित १२ जना माथि किटानी जाहेरी परेको थियो । जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालयले दुबै जाहेरीमा एउटै प्रकारको निर्देशनात्मक सिफारिश गरेको देखिन्छ । पर्सा प्रहरीलाई जिल्ला न्यायधीवक्ताको कार्यालय पर्साले हत्या आरोपीहरुको बिषयमा अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि आज परेको किटानी जाहेरीमा समेत निर्देशन सहितको सिफारिश गरेको देखिन्छ ।
गुडिया देवी नाम गरेकी महिलाले दिएको किटानी जाहेरीमा नेकपाको केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं प्रदेश २ का सह इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पर्सा इन्चार्ज रामचन्द्र साह, पार्टीको प्रदेश कमिटीका सदस्य छोटेलाल यादव, पार्टीको जिल्ला कमिटीका सदस्य बिक्रम चौरसिया, बिन्दवासीनी गाउँपालिकाका परशुराम यादव, चंचल यादव, होदा राउत गदी, महादेव चोहान, कलसरीफ राउत गदी, सभासद राउत गदी, सवादिन राउत गदी, रुषत्तम राउत गदी, मोहन यादव, जितेन्द्र चौरसिया र समन साह बानिया लगायत १५ जनाको मिलोमतोमा मुकेश चौरसियाको हत्या भएको ओरोप किटानी जाहेरीमा लगाइएको छ ।
उपचारको क्रममा मुकेश चौरसियाको मृत्यु भएकै दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडी प्रदर्शन गरिदैँ । तस्बिर : मध्य नेपाल फाईल
किटानी जाहेरी दिने गुडिया देवीले ती १५ जना प्रतिवादीहरुले उत्तम तिवारी, पुकार तिवारी भन्ने चिन्टु तिवारी र मुकेश चौरसियालाई मार्ने उद्धेश्यले आक्रमण गरेको दावी लिएकी छिन् । पर्सा प्रहरीले यस अघि प्रहरीले चौरसियाको हत्या आरोपमा घाइते रहेका उत्तम तिवारीलाई भने गिरफ्तार गरि सकेको छ ।
यसअघि मुकेश चौरसियाका परिवारजनले दिएको उजुरीमा राजकुमार गुप्तालाई हत्याको मुख्य आरोपि मध्येको रुपमा जाहेरी परेको थियो । भने आज त्यही हैसियत मुद्धा दर्ताका लागि सडक तताएका नेताहरुको पनि भएको छ ।
यस्तो थियाे नेता कार्यकर्ता कुटाकुट
प्रहरीले घटनास्थलमा उपलब्ध नेताहरुले कार्यकर्ताकोवीचको झगडा छोडाउने प्रयास किन गरेनन भन्ने प्रश्नबाट अनुसन्धान थाल्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । घटनाको बिषयमा सार्वजनीक भएका भिडियोहरुमा देखिएको तथ्यका आधारमा अनुसन्धान शुरु गरिने एक प्रहरीले अधिकारीले बताएका छन । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि किटानी जाहेरीमा उल्लेख ब्यक्तिहरुलाई गिरफ्तार गर्न सक्ने पर्सा प्रहरीको दावी छ ।
कुटाकुटमा घाईते भएका उत्तम तिवारी नारायणी अस्पतालमा उपचार गराउँदै । तस्बिर : मध्य नेपाल फाईल
बासका भाटाहरु कार्यक्रम स्थलमै किन ब्यवस्थापन गरिएको थियो ? यद्धी झगडा हुने पूर्व अनुमान थियो भने प्रहरीलाई खवर किन नगरिएको हो ? झगडा हुने अनुमान हुदा हुदै कार्यक्रम किन आयोजना गरिएको थियो भन्ने कुराको आधारमा अनुसन्धान हुन सक्ने आधारहरु रहेको कानुन व्यवसायीहरुको भनाई रहेको छ ।
कार्यकर्ता कुटाकुट प्रहरीले मानेनन् मुद्दा दर्ता गर्न (भिडियो रिपोर्ट)
पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाको प्रसौनी भाठामा कात्तिक ६ गते नेकपाको गाउँ पालिका कमिटीको शपथग्रहण कार्यक्रम चलिरहेकै बेला कार्यक्रममा आफूहरूलाई नबोलाइएको भन्दै एउटा पक्षले अर्को पक्षसंग चर्काचर्की भई कुटाकुट भएको थियो । कुटाकुटले एकको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनबढी घाईते भएका थिए ।
#नेकपा कार्यकर्ता हत्या प्रकरण #नेकपा एमाले र माओवादी #नेकपा कार्यकर्ताबिच झडप #नेकपा कार्यकर्ता कुटाकुट
बिहिवार, कार्तिक २०, २०७७, ०७:११:००